नाइजेरियामा ६ तले भवन भत्किँदा ८६ जनाको मृत्यु
नाइजेरिया, ५ असोज । नाइजेरियामा एक ६ तले भवन भत्किँदा ८६ जनाको मृत्यु भएको शनिबार नाइजेरियाली अधिकारीहरुले पुष्टि गरेका छन् । गत सेप्टेम्बर १२ मा लागोसदेखि दक्षिणपश्चिममा पर्ने एक स्थानमाअवस्थित चर्च भवन भत्किएको थियो...
ह्वाइट हाउसमा एक व्यक्ति पर्खाल नाघेर प्रवेश गरेपछि तनाव
वासिङ्टन, ४ असोज । ह्वाइट हाउसको परिसरमा शुक्रबार एक व्यक्ति पर्खाल नाघेर प्रवेश गरी भवनमा प्रवेश गर्न खोजेपछि अन्य व्यक्तिलाई हटाएको छ भने ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा तथा...
मोदीको जन्मदिनमा आमा हिराबेनले सोधिन– तिम्रो स्वास्थ्य कस्तो छ ?
काठमाडौँ, १ असोज । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफु ६४ वर्ष पुगेको अवसरमा आफ्नी आमाको आशिर्वाद लिनुभएको छ । बुधबार उहाँ आफ्नी आमा हिराबेनलाई भेट्न गुजरातको गान्धीनगर जानुभयो । प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँ पहिलो पटक...
इबोला संक्रमण नियन्त्रण नहुँदा ओबामालाई टाउको दुखाइ
वासिङ्टन, १ असोज । पश्चिमी अफ्रिकाबाट सुरु भएको इबोलाको संक्रमण नियन्त्रणबाहिर पुगेको र यो एक विश्व सुरक्षाको लागि एक चुनौतीका रूपमा आएको बताइएको छ । यस संक्रमणले विश्वलाई नै जनस्वास्थ्यको एक प्रमुख चुनौतीका रुपमा...
चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङ मङ्गलबार श्रीलङ्का जाने
कोलम्बो, ३१ भदौ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ आफ्नो देक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको भ्रमणको दोस्रो पाइलाका रुपमा मङ्गलबार श्रीलङ्का पुग्दै छन् । उनी विगत करिब २८ वर्षपछि श्रीलङ्काको भ्रमण गर्ने पहिलो चिनियाँ राष्ट्रपतिका रुपमा आज...
खुल्दैछ क्यासिनो, नेपालीले प्रवेश पाउँछन कि पाउँदैनन ?
काठमाडौं, ३१ भदौ । नेपालमा संचालित क्यासिनोहरु ६ महिनादेखि बन्द छन् । सरकारले क्यासिनो नियमावली २०६९ का अव्यहारिक प्रावधान संशोधन गर्न बिलम्ब गर्दा नौ हजार मजदुरको रोजगारी गुमेको छ । क्यासिनो नियमावली २०६९ लाई...
युक्रेनमा अमेरिकी नेतृत्वमा संयुक्त सैन्य अभ्यास
युक्रेन, ३० भदौ । युक्रेनमा अमेरिकी नेतृत्वमा विभिन्न १५ वटा देशको सहभागितामा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने भएको समाचार छ । युक्रेनको पूर्वी भागमा विद्रोहीहरुले आक्रमण जारी नै राखेका तथा केही समयका लागि युक्रेनको सरकार...
लेवनान, २९ भदौ । इस्लामिक स्टेट आइएस आतङ्ककारीहरूले बेलायती सहयोग नियोगका एक कर्मचारी डेभिड हेन्सको हत्या गरेको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । चौवालीस वर्षीय डेभिडलाई गत मार्च महिनामा उत्तरी सिरियाको एउटा शरणार्थी शिविर नजिकैबाट...
दक्षिण कोरिया, चीन र जापानबीच सोलमा उच्चस्तरीय कुटनीतिक वार्ता
सोल, २६ भदौ । दक्षिण कोरिया, चीन र जापानबीच दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा बिहीबार उच्चस्तरीय कुटनीतिक वार्ता हुने भएको छ । सो वार्ताका क्रममा त्रिपक्षीय सहयोगसम्बन्धी वार्ता हुने सोलस्थित दक्षिण कोरियाली विदेश मन्त्रालयले जानकारी...
पाकिस्तानमा मस्जिद भत्कियो, चौबीसको मृत्यु
लाहोर (पाकिस्तान), २५ भदौ । पाकिस्तानी सहर लाहोरमा मङ्गलबार एक मस्जिदको छत खस्दा त्यहाँ रहेका कम्तीमा पनि २४ व्यक्तिको ज्यान गएको समाचार छ । उक्त मस्जिदमा प्रार्थना गरिरहेका कम्तीमा पनि २४ व्यक्तिको मृत्यु भएको...
किन चीन आउँदैछन् ओबामा ?
वेइजिङ, २३ भदौ । अगामी नोभेम्बरमा हुन गइरहेको अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको चीन भ्रमणका तयारीका लागि ह्वाइट हाउसकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार आज वेइजिङ पुग्नुभएको छ । अमेरिकाको ह्वाइट हाउसका सुरक्षा सल्लाहकार सुसान राइसलाई चीनका...
अफगानिस्तानमा यथाशिघ्र राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न ओबामाको सल्लाह
सिङ्टन, २३ भदौ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अफगानिस्तानका राष्ट्रपतीय उम्मेदवार द्वयलाई आपसमा सद्भाव राखि यथाशिघ्र राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न सल्लाह दिएका छन् । गत आइतबार ह्वाइट हाउसद्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति ओबामाले अफगानिस्तानका...